Inkqubo ye-China Electric Mobile racking kunye neFektri Huade
I-chassis ixhotyiswe ngeemoto ezenza ukuba ii-racks zihambe ecaleni kweetraki, zishiya ukuvulwa kwe forklift ukufikelela. Ukuvulwa kwendlela enye kuphela efunekayo endaweni yeendlela ezininzi ze forklift zokuhamba ngokwenkqubo yesiqhelo yokurhabaxa.
Amanyathelo okhuselo anje ngotshintsho lokumisa okungxamisekileyo, isithintelo sokufikelela kwi-photoelectric, iinkqubo zokukhutshwa kwesandla, izixhobo zokusondela kufutshane kunye nezithintelo zokukhusela i-photoelectric zikhona ukuqinisekisa ukhuseleko lwabasebenzi neempahla.
Inkqubo yokubaleka yombane ixhotyiswe nge-PLC ukwenza imiyalelo evela kulawulo olukude ngumqhubi, imisebenzi ehlakaniphile njengokunyusa umsantsa wokuvula phakathi kwesisu semoto sokujikeleza komoya okungcono kunokwenziwa ngenkqubo yePLC, imisebenzi enjalo iyenza inkqubo yokurhabaxa esizenzekelayo. .
Izakhelo ezithe nkqo zilungelelaniswe kwi-chassis, kwaye iipali zisetyenziselwa ukulayisha iipalali kunye nokudibanisa izinto eziphakamileyo kunye ne-chassis, ngamanye amaxesha iishelfu zisetyenziselwa ukugcina izinto ezincinci. Ngenxa yokuba ukuphakama kweforklift kunokufikelela kuhlala kuncitshisiwe, le nkqubo yokurhabaxa ihlala igcina indawo enobungakanani obuphakathi nophakathi.
Inkqubo yokubaleka ngombane ilungile kubasebenzisi abafuna ukwandisa ukugcinwa kodwa banqunyelwe ngumgangatho wendawo yokugcina. Indawo esemgangathweni esetyenzisiweyo inikezela ngenkqubo yokurhabaxa ephathekayo lukhetho olufanelekileyo lokugcina kubanda.
Izinto eziluncedo zenkqubo yeenwele zombane:
Indawo yokugcina ephezulu ngaphandle kwendawo eyongezelelweyo yomgangatho
Ukugcinwa okuphantsi kunye nokusebenza okuzinzileyo
Imowudi yokusasaza ebusuku ivumela ukusasazeka komoya obandayo okungcono (ukugcina kubanda)
Inkqubo yokulawula eneensenzi ezahlukeneyo ukugcina indawo yokusebenza ikhuselekile
Egqithileyo Inkqubo yokuThutha abantu
Okulandelayo: Inkqubo yokuThutha i-Shuttle